ဒီကနေ့တင်သွင်းတဲ့ အကြံပြုချက် အစီရင်ခံစာ တင်ပြချက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းနဲ့ မေးမြန်းချက်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီက လက်ခံရရှိတဲ့ အကြံပြုချက် အစီရင်ခံစာကို ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းရာမှာ အခြေခံဥပဒေထဲက ပုဒ်မတစ်ချို့ကို မပြင်ဆင်ဘဲ လက်ရှိအတိုင်းဆက်လက်ထားဖို့ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်သိန်းခြောက်ထောင်ကျော် စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တင်ခဲ့တယ် လို့ ကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ခြင်း ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၄၃၆ ကိုလည်း ဒီအတိုင်းဆက်လက် ထားဖို့ ပါရှိပါတယ်။ အဲဒီပုဒ်မကိုတောင် မပြင်ရဘူးဆိုရင် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဟာ လုံးဝဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် သူရဦးအောင်ကိုက ပြောပါတယ်။
“အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၉(စ)ကိုလေ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ တစ်သိန်းခြောက်ထောင်ဆိုသော လူပုဂ္ဂိုလ်တွေက မပြင်ပါနဲ့ မထိပါနဲ့လို့ အကြံပြုတယ်လို့ အပြင်ဥပဒေစိစစ်ရေး တစ်ဦးကနေပြီးတော့မှ ပူးပေါင်းကော်မတီကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်၊ သူ့တင်ပြချက်အတိုင်းပဲ ဒါကိုပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်၊ တစ်သိန်းကျော်က နာမည်ရေးတယ် လက်မှတ်ရေးထိုးတယ်ပေါ့၊ လွှတ်တော်ကတော့ ခိုင်မာမှု မသေချာဘူးလို့ပဲ ပြောပါရစေ”
မပြင်ဆင်ဘဲ ဒီအတိုင်းဆက်လက်ထားဖို့ အကြံပြုထားတဲ့ ပုဒ်မတွေကတော့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမှာ တပ်မတော်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကို ဖော်ပြတဲ့ ပုဒ်မ ၆ (စ) ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားတဲ့ ပုဒ်မ ၅၉(စ)၊ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်မယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးရဲ့ ၇၅% ကျော်ရှိရမယ်၊ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဒ်မ စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ကော်မတီက တင်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာ ပါတီတွေ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အကြံပြုချက်တွေကို တင်ပြတဲ့စာပေါင်း နှစ်သောင်းရှစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မတီက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို ဒီကနေ့တင်သွင်းလိုက်တဲ့ အကြံပြုချက်အစီရင်ခံစာနဲ့ ပတ်သက်လို့ RFA သတင်းထောက် မဇင်မာဝင်း တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မတီဟာ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး အကြံပြုချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစီရင်ခံစာကို ဒီကနေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းလိုက်သလို လွှတ်တော်ထဲမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စ ဆက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက် မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်း နောက်ထပ်အဖွဲ့တစ်ခု ထပ်မံဖွဲ့စည်းဖို့လည်းရှိပါတယ်။
ဒီအကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းကို မသင်းသီရိက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအတည်ပြုရာတွင် ထောက်ခံခဲ့သော ၉၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း ထောက်ခံတယ်။
တစ်သိန်းခြောက်ထောင်ကျော်သော လူပုဂ္ဂိုလ်တွေက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမပြင်ပါနဲ့၊ မထိပါနဲ့လို့ အကြံပြုတယ်လို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ CEC တစ်ဦးက ပူးပေါင်းကော်မတီကို တင်ပြခဲ့တယ်။
ခင်ဗျားတို့ ပြောပုံဆိုပုံလုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကိုတော့ ခင်ဗျားတို့ မရှက်တက်ပေမဲ့ ကျွန်ပ်တို့ ပြည်သူတွေကတော့ သိပ်ရှက်တယ်။
နိုင်ငံတော်အတွက် အလုပ်လုပ်မယ့် စိတ်ရင်းနဲ့နှလုံးသား ဖြူစင် လူ မရှိ တာ ကျွန်ပ်တို့ ပြည်သူတွေကတော့ သိပ်ရှက်တယ်။
Feb 01, 2014 06:15 AM
The report of The Joint-Committee for Reviewing the 2008 Constitution (JCRC) is just another BS.
Feb 01, 2014 12:39 AM
ငွေချေး ပြီး မက်လုံး ပေးပြီး လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်သိန်းခြောက်သောင်းကျော် နာမည်ရေးလက်မှတ်ရေးတင် ခဲ့တယ်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မတီ ရဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် ပါတီ တခုခု စီစဉ် ရှိနေ တာ အသေချာဘဲ ၊
Jan 31, 2014 11:42 PM
၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်း လူမှုအဖွဲ့အစည်းက ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ကိုမြအေးက ပြောပါတယ်။
" မပြင်ဘဲနဲ့ တင်းကျပ်ထားမယ်ဆိုရင် ကျနော်မြင်တာကတော့ ဒါဟာ ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုတွေရဲ့ ပြဿနာသပ်သပ်မဟုတ်ပဲ တပြည်လုံးရဲ့ ပြဿနာဖြစ်တယ်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရမယ့် ကိစ္စတွေရှိတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေ၊ ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေ၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတွေ ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံဟာ ဘယ်လိုမှအလုပ်မဖြစ်ဘူး။
ဖွတ်ပါတီ အနိုင်ရရှိရေး အတွက် မသမာသောနည်းမျိုးစုံကိုံသုံး နေ ကြတယ၊်
တခုခု စီစဉ် မှာတော. အသေချာဘဲ ၊
ပြည်သူတွေ နိုင်ငံရေးသတိ နိုးနိုးကြားကြား ရှိနေသင့်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မတီ ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ထောက်ပြကြဖို့ကလည်း တိုင်းပြည်အတွက် တကယ့်ကို အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍပါ။
Jan 31, 2014 07:25 PM